၏သမိုင်း SANOVO TECHNOLOGY GROUP
၏မူလအစ SANOVO TECHNOLOGY GROUP ကြက်ဥဖောက်စက်မှာ ရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေဆီ ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များစွာတွင် အောင်မြင်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဖြစ်လာပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ဇယားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ အခင်းအကျင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလဲစေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတွင် တိကျသေချာသည့် အခိုက်အတန့်အချို့ကို ပုံဖော်ထားသည်။
SANOVO အတတ်ပညာကို မူလက ခေါ်တယ်။ SANOVO အင်ဂျင်နီယာချုပ် A/S ကို Lactosan နှင့် Danish Toeraeg စက်ရုံအမည်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ SANOVO Levnedsmidler A/S ကို 1961 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဒိန်းမတ်၊ Odense တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဓိကပစ်မှတ်မှာ အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ကြက်ဥဖောက်ခွဲစက်များ အမြန်ထုတ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 1979, ကုမ္ပဏီအသစ် SANOVO အင်ဂျင်နီယာချုပ် A/S ကို ထုတ်လုပ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် 100% Lactosan- ပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။SANOVO Holding (ယနေ့ THORNICO ဟုခေါ်သည်)။
STAALKAT ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Van Katwijk's Industrial ကိုတည်ထောင်သူ Mr Dirk van Katwijk သည် Holland အရှေ့ဘက်ရှိ Hummelo တွင် Libra ကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Aalten သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအတွက် စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူ့စိတ်ကူးမှာ ရှိပြီးသား ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှလွဲ၍ ကြက်ဥအဆင့်သတ်စက်များ ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၅၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး STAALKAT ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
2006 ခုနှစ်တွင် STAALKAT နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP ယနေ့တွင် ၎င်းကို အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ SANOVO နည်းပညာနယ်ပယ်။
SANOVO Ovotrack Holding BV တွင် ဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက် Ovotrack ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြက်ဥ အမျိုးအစားခွဲခြင်းစင်တာများ၊ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများနှင့် သားပေါက်စက်ရုံများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များအား ပေးသွင်းသူ Ovotrack Holding BV နှင့် သဘောတူညီခဲ့သည်။ Ovotrack သည် အမှီအခိုကင်းစွာ ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး Job Beekhuis သည် Ovotrack BV နှင့် Hatchtrack BV နှစ်ခုလုံးအတွက် CEO အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
SANOVO ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမည်ရပိုင်ခွင့်များ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနများနှင့် SonoSteam လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆက်စပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်5ဦးတို့ကို ရယူပါသည်။ ကုမ္ပဏီအသစ် SANOVO BIOSECURITY A/S သည် SonoSteam မှ လက်ရှိဌာနခွဲဒါရိုက်တာ Niels Krebs နှင့် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
SANOVO 2000 ခုနှစ်အစကတည်းက လက်တင်အမေရိကတွင် ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက် Sao Paulo တွင် ရုံးအသစ်ဖွင့်လှစ်ရန် 2019 ခုနှစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ SANOVO SOUTH AMERICA နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မတူညီသောစီးပွားရေးနယ်ပယ်များရှိ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် LATAM တစ်ခုလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
SANOVO နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စက်ရုပ်များကို ၎င်းတို့၏တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် တည်ထောင်ထားပြီး ယနေ့တွင် Odense Denmark၊ Datavej 2,980 ရှိ2m12 အဆောက်အအုံတွင် တည်ရှိသည်။
Giordano ကြက်ငှက်ပလပ်စ်သည် အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည်။
ဒိန်းမတ်ရှိ ဌာနချုပ်သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ Odense ရှိ Datavej3ရှိ ထိပ်တန်း ခေတ်မီအဆောက်အအုံတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့သည်။ ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထုတ်လုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ 10,700 m2 ရှိသည်။
NIKRO သည် အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည်။
SANOVO လုပ်ငန်းစဉ်ဖြေရှင်းချက်များအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP - DSM မှ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအထိ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အင်ဇိုင်းများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
STAALKAT အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (ယနေ့ SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS) နှင့် RAME-HART တို့သည် Group တွင်ပါဝင်ပါသည်။
နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော် အရည်အသွေးမြင့်မားသော STAALKAT အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကို 2018 ခုနှစ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ SANOVO.
SANOVO ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက အီတလီတွင် ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းရှိခဲ့သော်လည်း ယင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ကြက်ဥထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂ မှာ SANOVO Italia srl ​​ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် pasteurization၊ CIP၊ SCADA စနစ်များ၊ WAVE စသည်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ဖြစ်သည်။
2019 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Vicenza ရှိ မူလစက်ရုံမှ Marano Vicentino ရှိ လက်ရှိခေတ်မီစက်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်သည် အရေးကြီးသော ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SANOVO စျေးကွက်ရှိ ကြက်ဥဖောက်ခွဲစက်အားလုံး၏ 60% ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 1987 ခုနှစ်မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် တိုကျိုမြို့လယ်တွင် အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရုံးတစ်ခုရှိသည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရှိ ရုံးချုပ်သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ Odense ရှိ Thulevej ရှိ အဆောက်အအုံအသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆောက်အအုံသို့ တိုးချဲ့မှုများစွာပြုလုပ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတည်နေရာသို့ 2016 ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
SANOVO USA Inc. ကို New York တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1984 ခုနှစ်တွင် Salt Lake City, Utah သို့ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 1 ရက် 1996 ခုနှစ် SANOVO အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Seymour က တာဝန်ယူသည်။
ယနေ့ SANOVO US တွင် ကြက်ဥ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် နံပါတ်တစ် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖောက်သည်ရောင်းချသူဖြစ်လာပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အမြင့်ဆုံးသော သွင်းအားစုနှင့် အထွက်နှုန်း။ US ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည် ယနေ့ Michigan ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း ၄၀ ကျော်ရှိသည်။
ကြက်ဥ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတိုင်းအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ ကုန်ကြမ်းထွက်ကုန်များမှ အထွက်နှုန်းမြင့်မားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ ပရောဂျက်များကို ရေးဆွဲသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို အမြဲရှာဖွေနေပါသည်။ စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အရည်ထုတ်ကုန်များ၏ 0.5% မှ 1.0% ဆုံးရှုံးသွားသည်ကို လေ့လာသိရှိခဲ့ပြီး၊ ဤဆုံးရှုံးမှုကို ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ထပ်မံပြောင်းလဲနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွေးတောမိပါသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် တန်ဖိုးရှိသော လုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်အား သင့်အား ဝမ်းမြောက်စွာ တင်ပြလိုပါသည်။ SANOVO ProductRecovery.
SANOVO လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုမထိခိုက်စေဘဲ ကြက်ဥထုတ်ကုန်ကို coagulation point နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာ pasteurize လုပ်ပေးသည့် မူပိုင်ခွင့် WAVE နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ အရွေ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် တစ်စက္ကန့်အတွင်း တူညီသောအပူချိန်သို့ အပူပေးသည်။ အဆိုပါနည်းပညာသည် အလွန်အပူဒဏ်ခံနိုင်သော Salmonella serotypes များကိုပင် ဖယ်ရှားရာတွင် အလွန်ထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကြက်ဥထုတ်ကုန်၏ အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
2006 ခုနှစ်တွင် VIV Utrecht ရှိုးတွင်ကမ္ဘာ့ premiere ၏ SANOVO OptiBreaker ကိုထွက်ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် OptiBreaker သည် တစ်နာရီလျှင် 600 case/hour စွမ်းရည်ရှိသော၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်းရဆုံး breaker ဖြစ်သည်။
1996 ခုနှစ်, SANOVO အတန်းကြက်ဥကို ဖောက်ထွင်းသည့် စက်များစွာထဲမှ ပထမဆုံး စတင်လိုက်ပါ။ SANOVO 6-25 တစ်နာရီလျှင်ဥ 54.000 စွမ်းရည်ရှိသည်။ နည်းပညာသစ်သည် ကြက်ဥ6လုံးကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ခွဲထုတ်သည့် စနစ်သစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
1996 တွင် USDA ၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
SANOVO Henningsen မှ မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော Box Dryer ကို ထုတ်လုပ်ရန် အခွင့်အရေးကို ရယူသည်။ ၎င်းကို သေးငယ်သော ဂျက်လေယာဉ်များမှတစ်ဆင့် အရည်များ ခြောက်သွားအောင် အလျားလိုက် မှုတ်အခြောက်ခံစက်အဖြစ် တည်ဆောက်ထားသည်။
ယနေ့ SANOVO ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ရေပြင်ညီအခြောက်ခံစက်နည်းပညာကို ကမ္ဘာတွင် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ SANOVO နည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြက်ဥထက်အခြားထုတ်ကုန်များစွာကိုခြောက်သည် - ဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ.
အဖြူနှင့် အနှစ်ကို ခွဲခြားခြင်းသည် လူဖြူများ၏ ကြာပွတ်စွမ်းရည်ကို မထိခိုက်စေရန် ပြီးပြည့်စုံရန် လိုအပ်သည်။ ကြက်ဥကွဲခြင်း၏ပထမနှစ်များအတွင်း ခွဲထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းဖြင့်၊ ဤပျင်းစရာကောင်းသောတာဝန်ကို စကင်နာများသုံးပြီး အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
အလိုအလျောက် စကန်ဖတ်စက်၏ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ SANOVO 1980 အစောပိုင်းတွင်။
ဘက်တီးရီးယားများ နှင့် salmonella ကင်းစင်သော ကြက်ဥ ထုတ်ကုန်များကို သေချာစေရန်အတွက် ပါစူရီဆေးပင်များ။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် SANOVO ၎င်း၏ pasteurization နည်းလမ်းကို အနောက်ဥရောပဈေးကွက်အများအပြားတွင် မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း နိုင်ငံအများအပြားတွင် ပါစော်သန့်စင်မှုအတွက် တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ၊ SANOVO ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် pasteurization စက်ရုံများကိုရောင်းချပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ SANOVO ၂၀၀၂-၆ တွင် စနစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်တွင် ကြက်ဥဖောက်စက်တစ်ခုသာမကဘဲ ကြက်ဥလျှော်စက်တစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် အသစ်တီထွင်ထားသော အလိုအလျောက် Loader လည်း ပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါ SANOVO 2000 တွင် အဖြူနှင့် အနှစ်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အလျားလိုက်ထည့်ထားသော ခွက်တစ်ခုစီတွင် ကြက်ဥကွဲရန်အတွက် ဗြောက်အိုးဖြင့် နိယာမကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းက ရေနုတ်ယူချိန် ပိုရှည်စေပြီး ကြက်ဥ/နာရီ ပမာဏ 22,000 နီးပါးအထိ တိုးလာနိုင်သည်။
အဆိုပါ SANOVO 6-32 ကို Long Egg Machine ဟုခေါ်သည်။ အနီးစပ်ဆုံးသော ကြက်ဥအပိုင်းအစများကို ထုတ်ပေးသော စက်။ 20 စင်တီမီတာ။ ရှည်လျားသော အနှစ်၏ အလယ်ဗဟိုသည် အဖြူရောင်ပင် အထူဖြင့် ဝိုင်းရံထားသောကြောင့် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ပြပွဲတွင် အာရုံခံစားမိပါသည်။
ဂျာမနီတွင် တီဗီထုတ်လွှင့်မှုမှ မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကို ကြည့်ပါ။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းကတည်းက၊ SANOVO ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံများကို စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ ပရောဂျက်များတွင် ကြက်ဥဖောက်စက်များ၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းထည့်ခြင်းအပြင် အရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဆွေးနွေးချက်များနှင့် အမှုန့်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အခြောက်ခံစက်များ ပါဝင်ပါသည်။
ယနေ့ SANOVO ကြက်ဥလုပ်ငန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော turnkey solutions များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ SANOVO 400 ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး 1968 ဆောင်းဦးတွင်လန်ဒန်၌ 23rd ကြက်ငှက်ပြပွဲအတွင်းငွေတံဆိပ်တစ်ခုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေး၏အစ SANOVO A/S နည်းပညာသည် ပထမဆုံး အလိုအလျောက် ကြက်ဥဖောက်စက်ဖြင့် စတင်သည် - SANOVO ၃၀၀ နဲ့ ဆက်တယ်။ SANOVOအပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ကြက်ဥကို ဖောက်ခွဲခြင်းနှင့် ပိုင်းခြားသည့် စက်များ၏ နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်များစွာ။
ကြက်ဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင် မှတ်တိုင်များ
အဆိုပါ SANOVO TraystackerSX20 သည် အသေးစား/အလတ်စား ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးခြံများတွင် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့် SX20 ကို 30x ကြက်ဥဗန်းများစုထားသောနေရာလွတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။ ergonomic ဒီဇိုင်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက်စေသည်။
အသစ် SANOVO GraderPro သည် တစ်နာရီလျှင် အမှုပေါင်း 800 ကို စျေးကွက်တွင် ဦးဆောင်သည်။ GraderPro ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာလွန်ညင်သာသော ကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းကို လုံခြုံစေမည့် ကိုင်တွယ်နည်းများနှင့် အင်္ဂါရပ်များစွာကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းအပြင် သင့်အား အနည်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သော စက်တစ်လုံး၊ ကြက်ဥတစ်လုံးစီကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် CIP (နေရာအတွင်း သန့်ရှင်းရေး) ဖြင့် အလွန်ထိရောက်သော သန့်ရှင်းရေးကို ပေးစွမ်းရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။
တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 216,000 စွမ်းရည်ရှိသော အကြီးစား အမျိုးအစားခွဲစက် OptiGrader ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် အိမ်တွင်းတီထွင်ဖန်တီးထားသော crack detector စနစ်ပါရှိသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 254.000 စွမ်းရည်ရှိသော စက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်သည် US တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
2004 ခုနှစ်တွင် Ardenta ကို crack စနစ်အသစ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
1994 ခုနှစ်တွင် အက်ကွဲ၊ သွေးနှင့် အရိုးကျိုးခြင်းစသည့် အလိုအလျောက် ထောက်လှမ်းမှုစနစ်ပါရှိသော Selecta 12 နှင့် 18 အတန်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
1997 ခုနှစ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 24 စွမ်းရည်ရှိသော Selecta 180,000 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
1993 ခုနှစ်တွင် ထုပ်ပိုးသူများ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသော ထုပ်ပိုးမှုစနစ်အသစ်ဖြင့် farmpacker 192S ကို တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ ၃၆,၀၀၀ ဖြင့် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အသစ်တီထွင်ထားသော ကွန်တိန်နာတင်စက်သည် စွမ်းရည်မြင့်မားသောနေရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
1989 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး semi-automatic candleler - IRUS ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
1991 ခုနှစ်တွင် ECM 300 ကို "rolling weight" ဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 25,000 ခန့် စွမ်းရည်ရှိသော ရိုးရှင်းသော အမျိုးအစားအသေးစားကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
1983 ခုနှစ်တွင် Electro Compacta 200 ကို တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 72,000 စွမ်းရည်ဖြင့် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
1971 ခုနှစ်တွင် Super Compacta သည် တစ်နာရီလျှင် ကြက်ဥ 25,000 စွမ်းရည်ရှိသော ရိုးရှင်းသော အမျိုးအစားအသေးစားတစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
peak absorber/accumulator နှင့် first farm packer များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ပထမဆုံး 12 တန်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကြက်ဥတန်းစက်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအတွက် နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စျေးကွက်က စွမ်းဆောင်ရည် ပိုတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက် Staalkat ဟာ သူတို့ရဲ့ စက်တွေကို 1975 ခုနှစ်မှာ Electro Compacta ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
1962 တွင် တစ်ဦးချင်းကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပထမဆုံးစက်- Aviolanda ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ 1964 ခုနှစ်တွင် အီလက်ထရွန်းနစ်စကေး၏ မူပိုင်ခွင့်ကို တင်သွင်းခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဈေးကွက်သည် 1960 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းအတွက်၊6တန်းရေဆေးစက်နှင့်ဆက်စပ်၍6တန်းစက်ကိုတီထွင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစက်သည် Rolls Royce အမျိုးအစားခွဲစက်ဖြစ်သည်။
1960 ခုနှစ်တွင် အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးသည့် စက်များ တီထွင်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုမှ ထွက်လာသော ပထမဆုံး ကြက်ဥ အမျိုးအစား စက်များသည် သစ်သားဘောင်များဖြင့် နှစ်တန်း၊ သုံးတန်းနှင့် လေးတန်း အဆင့် အတန်းပေးသည့် စက်များ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစက်များသည် အလိုအလျောက် Loaders ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ အကြောင်းရင်းခံဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယခု နှစ် 60 ကျော်ကြာ သက်သေပြခဲ့သည့် စကေးနိယာမဖြင့် အလေးချိန်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။